Muddamni Abijaan Keessaa hammaate
Ebla 05, 2011
Prezidaantii Ivory Coast ta'anii filatamuun isaanii kan beekkannaa sadarkaa addunyaa argate humnootiin Alasan Wataaraa presidentii biyattii kan yeroo ammaa aangoo irra jiran Larurent Baagboo aangoo irraa buusuuf falmii isa dhumaa geggeessaa jiran.
Ka muddama sana daranuu hammeesse ka biraan immoo ka duraan, maatii isaanii waliin EmbasiiI Afriikaa Kibbaa biyyattii keessaatti dahata Polotikaa gaafatanii turan Hoogganaan waraana Baagboo Philip Manguu, deebi’anii waraanichatti makamuu isaanii ti.
Dhiibbaa isa xumuraa gochuuf oduun jedhu yeroo dhagahamaa jiru kanatti, haleellaan kun kan hin oollee tahuun isaa waan mirkanaawe miti ka jedhan Jaarmayaa Eurasia jedhamu irraa xiinxaltuu dhimma Afrikaa Aan Fraa'ufi ripxe loltoota gidduutti attamiin haala kana tarkaanfachiisuun akka itti danda'amu ilaalchisee walii galtee hagi tokko akka jiru nu hubanna jedhan.
As Yunaaytiid Isteetes keessa ka jiru Jaarmayaa “AnsaariiI Africa Center” - jedhamu irraa xiinxalaan ka biraan - Peter Pham-s yaada kanatti walii-galuudhaan “Haleellaan geggeessamu kam illee, hookkara hamaa tahuuf deema.
MP3 tuquun gabaasa guutuu caqasa.